« KMS » 2018: nivoaka ny fandaharam-potoana | NewsMada
« KMS » 2018: nivoaka ny fandaharam-potoana
Efa nivoaka ny anaran’ireo hamelabela-kevitra mandritra ny « Kôferansa momba ny soratra » 2018 (KMS 2018). Nivoaka nanaraka izany koa ny lohahevitra hohazavain’izy ireo. Ankehitriny, nivoaka ny fandaharam-potoana raikitra hotanterahina amin’io « KMS » 2018 io. Ny 10 novambra izao, ao amin’ny Haitsiron’Iarivo Infra etsy Alarobia ny hanatanterahana ny hetsika rehetra.
Hanomboka amin’ny 7 ora sy sasany maraina ny fizarana ny « kits » sy ny « badges ». Raha vao mipaika ny amin’ny 8 ora sy 30mn, hisesy tsikelikely ny velakevitra hiresahana lohahevitra marolafy. Haharitra adiny iray isanisany ny famoaboasana ny lohahevitra ka ny 20mn famelabelarana ny lohahevitra ny 40mn famaliana ny fanontanian’ny mpanatrika. Telo ny velakevitra maraina, roa kosa ny tolakandro. Mialoha ny famaranana, hisy ny fifanakalozan-kevitra malalaka.
« Mba hifantohan’ny tsirairay amin’ny zavatra rehetra atao eny an-toerana, ao amin’ny Haitsiron’Iarivo ihany no hanatanterahana ny sakafo antoandro sy ny fialana hetaheta eny antsefantsefam-potoana… Hentanina avokoa ireo rehetra mahatsiaro fa manana adidy amin’ny fikoloana ny teny sy ny soratra ho tonga marobe… », hoy ry zareo avy ao amin’ny vondrona Koloiko sy hajaiko ny teniko (KHT) mikarakara isan-taona ity hetsika ity. Ny Zoromanga sy ny Haitsiron’Iarivo kosa no mpiara-miasa amin’ny hanatanterahana izany.